Trump oo cambaareeyay weerarrada ka dhanka ah saxaafadda - Damqo
Trump oo cambaareeyay weerarrada ka dhanka ah saxaafadda
Donald Trump ayaa cambaareeyay weerarradda ka dhanka ah warbaahinta ka dib dhacdadii sawir qaadaha BBC-da ka soo gaartay goob uu madaxweynaha Maraykanku dad kula hadlay Isniintii oo ku taalla Texas.
Aqalka Cad ee Maraykanka looga arrimiyo ayaanse dhacdo gooni ah ka hadlin.
War qoraal ah oo ka soo baxay Aqalka ayaana lagu sheegay in madaxweynuhu “uu cambaaraynayo weerar kaste oo lagu bartilmaameed sado qof ama koox, kuwaas oo ay ka mid yihiin saxafiyiinta.
Nin qaba koofiyad ay ku qoran tahay Make America Great Again “sharaftii Maraykanka soo celi” ayaa kala tuuray oo u dhaartay Ron Skeans oo ka tirsan shaqaalaha BBC.
BBC-da ayaa markii dambe Aqalka Cad ka codsatay in uu dib u fiiriyo ammaanka shaqaalaha BBC-da ee wararka u raadsada goobaha uu Trump isu soo baxyada ku qabto.
Waraaqdaas ayay BBC-du ku sheegtay in uusan jirin cid la socotay aaga ay saxafiyiintu taagnaayeen, laamaha ammaankuna aysan isku dayin in ay dhex galaan intii arrintaasi ay dhacaysay.
Warka Aqalka Cad oo ay soo saartay xoghaye Sarah Sanders ayaa intaas ku daray “qof kasta oo isu soo baxyada ka qaybqaadanaya waa in uu si nabad galyo ah uga qayb qaataa.”
Previous Akhriso:-Madaxweynaha Koonfur Galbeed oo Magacaabis sameeyay
Next Sawirro:-Al-shabaab oo soo bandhigay Gaari dagaal ay ku qabsadeen